လေ့ကျင့်ခန်း လေးလည်း လုပ် နေ့စဉ် VITAMIN VIT C သောက်ကျပါ COVID ကာကွယ်ဖို့ ဆိုလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ပြည်သူ ချစ်တော် မင်းသမီး သင်ဇာဝင့်ကျော်…. – Shwe Naung
လေ့ကျင့်ခန်း လေးလည်း လုပ် နေ့စဉ် VITAMIN VIT C သောက်ကျပါ COVID ကာကွယ်ဖို့ ဆိုလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ပြည်သူ ချစ်တော် မင်းသမီး သင်ဇာဝင့်ကျော်….
N N | July 7, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်း အလှတရား တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ထိပ်တန်း မင်းသမီးလေး တစ်လက် အဖြစ်
ယနေ့ချိန်ထိ ရပ်တည် လျက်ရှိ နေသူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ကိုယ်လုံးလေး ဟာလည်း ပုရိသ တွေရဲ့ ရင်ထဲထိ တဖြုတ်ဖြုတ် ငြွေအောင် ဖမ်းစား ထားနိုင်သူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဇာဟာ အမြဲ လိုလိုလည်း ဆက်ဆီ ပုံလေးတွေ ရိုက်ကူးကာ ပရိသတ် တွေကို အမြဲဝေမျှ ပေးလျက်ရှိ နေတာပဲ ဖြစ်ပြီး အားလုံးကလည်း သူမရဲ့ ပုံရိပ် လေးတွေကို အမြဲစောင့်မျှော် အားပေး လျက် ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလော မှာလည်း သင်ဇာ တစ်ယောက် ကြော်ငြာလေးတွေ တောက် လျှောက် ရိုက်ကူး ဖြစ်နေ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု တိုင်းကိုလည်း ပရိသတ် တွေကို ဝေမျှပေးတတ်သူပါ။
အခုမှာ လည်း သင်ဇာရဲ့ Facebook မှာ ဗိုက်တာ မင်စီ သောက်နေတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပေး လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဝင်းဝါစိုပြေတဲ့ အသားအရည် လေးကိုပိုင်ဆိုင် ထားပြီး အမိုက်စား ပို့စ်လေးတွေ ပေးနေတဲ့ သင်ဇာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဇာဟာ အသက် (၃၀) ကျော်လို့ ထင်ရက် စရာမရှိဘဲ ဆယ်ကျော်သက် မလေးတွေ လို နုဖတ်ကာ ချစ်စရာ ကောင်းနေ ဆဲပါပဲနော်။ ပရိသတ်တွေ အတွက် သင်ဇာရဲ့ က Covid ကာကွယ်ဖို့ ဗိုက်တာမင်စီ လေးသောက် ကျဖို့ သတိပေး ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
မျက်ဝင်းရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ…….
အားကစားဝတ်စုံ နဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပေါ်လွင်နေတဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်…